I-Subterranean yanamhlanje 1 BDRM, 1 min ukuhamba ukuya elunxwemeni - I-Airbnb
I-Subterranean yanamhlanje 1 BDRM, 1 min ukuhamba ukuya elunxwemeni
Igumbi lokulala eli-1 langoku nelifikelelekayo elingaphantsi komhlaba (izinyuko ezi-7 ngaphantsi komhlaba) kwiplatinam ebukekayo kuNxweme oluseNtshona lwaseBarbados! Ukuhamba okwesibini ukuya elunxwemeni! Yonwabela zonke izinto eziluncedo zekhaya labucala ngaphaya kwesitrato ukusuka elunxwemeni. Sip a rum punch kwidesika yophahla kunye nemibono ebalaseleyo yolwandle lweCaribbean. Enye indlela enkulu yexesha elide kwiHotele.
Njengoko le ndawo iphantsi komhlaba, indawo engqongileyo ipholile. Eminye yemiba ekhethekileyo yeAvon Bleu Villa yimithi yeziqhamo enentabalala neqolileyo kwipropathi kunye nokuhamba ngokukhawuleza ukuya elunxwemeni.
I-St James ikuNxweme oluseNtshona lwaseBarbados, inezinye iilwandle ezikumgangatho ophezulu kwihlabathi. UAvon Bleu uhamba umgama ukuya kwiBar yezeMidlalo yeWendy eyaziwa ngokuba yikaraoke ngoLwesihlanu kunye nohambo olufutshane ukuya kwiHoletown eyaziwayo kunye nePayne's Bay Beach edumileyo.
Sifumaneka nge-imeyile, umbhalo kunye nefowuni